Jubbaland oo ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah xulufada Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Jubbaland oo ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah xulufada Farmaajo
Wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa ku dhawaaqay dagaal uu maamulkiisu la galayo ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada Baled-Xaawo.
BALED-XAAWO,Soomaaliya - Cabdirashiid Janan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maamulkiisa Jubbaland uu ka dhamaaday dul qaadkii isla markaana wixi hadda ka danbeeya ay u diyaar garoobayaan dagaal gobonimo doon ah sida uu hadalka u dhigay.
Wasiirka amniga Jubbaland ayaa sheegay in maamulkiisu joojinayo dagaalka ay kula jiraan Kooxda Al-Shabaab inta ay ka xoreynayaan degaanada uu tilmaamay in Farmaajo iyo kooxdiisu kusoo duuleen.
Janan, wuxuu kooxda Farmaajo ku tilmaamay kuwo ka damir liita Al-Shabaab, wuxuuna sheegay in hub Turikigu bixiyay oo Soomaali oo dhan u dhaxeeya ay ku xasuuqeen shacab ay madax u yihiin, isla markaana ay isku laayeen ciidamo calanka Soomaaaliya wada huwan.
Wuxuu sheegay in Farmaajo dalka kaliya kursi u soo raadsaday oo uusan dan qaran wadin, isla markaana aysan degaanadooda uga tageyn kulana dagaalami doonaan.
Wasiirka amniga Jubbaland wuxuu Shuhado ku tilmaamay ciidankii jubbaland ee ku geeriyooday dagaalkii dhawaaan ka dhacay magaalada Baled-Xaawo, wuxuuna ciidamada Dowladda ugu baaqay in ay dagaalka ka baxaan oo Farmaajo oo dhowr maalin kadib tagaya uusan galaafan.
Dhamaan awoodda ay jubbaland leedahay ayuu sheegay in ay isgu geyn doonaan Baled-Xaawo, shacabka deggan magaaladaas ayuuna ugu baaqay in ay ka baxan magaalada.